ITrovaWeb e-countertrend iqasha abantu abasha ngokunikeza amathuba
I-Sicilian Startup iqala ukuqasha okusha futhi iphinda kabili ukuzibophezela kwayo namakhasimende
Isikhathi sobhubhane nesikhathi se ubunzima bemakethe: nomaphi lapho ubheka khona, lokhu kubonakala kungumbuso ovelele. Uma ubheka ngokucophelela, noma kunjalo, kukhona amaqiniso afana I-TrovaWeb okuyinto, ngaphandle kwakho konke, ukuphatha ukukhula. Ake sibheke ukuthi kanjani.
yindlela I-TrovaWeb ikwazile ukuhlala ekuvumeni kwegagasi ngisho nangesikhathi ubhubhane lomhlaba. Ukuphumelela futhi sandise izinsizakalo zalo futhi ukuphinda kabili ukuzibophezela kwayo kumakhasimende. Ukuze enze lokhu, wenza isinqumo ngokuhlukile kumkhuba wamanje: wanquma ukwandisa umbuthano wabahlanganyeli bakhe ngokuqhubeka ukuqashwa okusha.
Izinsizakalo ezintsha zewebhu kanye nokuqashwa okusha: kusuka ku-TrovaWeb sekuyisikhathi sezindaba zawo wonke umuntu
Uma kuyiqiniso ukuthi ukuphela kwendlela yokunqoba ubunzima ukuthi uhlale uvuka ngokuzimisela okwengeziwe ngemuva kwesikhathi sobunzima, I-TrovaWeb nakanjani ubeka isibonelo. Ngempela inqume ukuphendula esikhathini sobhubhane ngenxa I-Covid-19 ukunwebisa iphothifoliyo yayo ngisho nangokwengeziwe izinsiza zewebhu ukuze uhlangabezane nezidingo eziningi nezenziwe kabusha zamakhasimende futhi abasebenzisi online. Kusha izinsiza zewebhu Ngakho-ke, yakhelwe ukugxuma nokubuyisa ubunzima ngenxa yemikhawulo ebekwe yinkathi leyo. Futhi mhlawumbe nokulandela izindlela ezintsha ezinhle ngelinye ikusasa.
Ochwepheshe abasha ukubhekana nezinsizakalo ezintsha zeWebhu
Njengoba wazi, isu elisebenza kahle kunazo zonke lokuhlinzeka ngezinsizakalo ezinembile nezisikhathi sonke ukukhetha ochwepheshe abalungiselelwe nabanekhono abanikeza lelo lungelo elingeziwe Umjikelezo Wokuhlelwa Kwama-Multimedia isilungele ikhwalithi nokusebenza. Futhi okuthi, nokho, kuvame ukuzama ukuthuthukisa nokuzivumelanisa ngokwengeziwe nezidingo zezinkulungwane abasebenzisi online abamvakashela nsuku zonke beyofuna izimpendulo. Kwalokhu I-TrovaWeb unqume ukukwenza thatha amaphrofayili amasha ochwepheshe lokho kungaqinisekisa ukukhula okungapheli kwezethu multimedia projekthi.
Ama-Webmasters, Abahleli, Ochwepheshe be-SEO Nochwepheshe emkhakheni Wezokuphatha: nayi iqembu eliwinayo elikhethwe yiTrovaWeb
Un Umjikelezo Wokuhlelwa Kwedijithali enikeza izinsiza Ukubonakala okuku-inthanethi, Ukukhangisa kwewebhu e Isimo se-organic kumele ikwazi ukubala ochwepheshe abaningi abafanelekile ku Umkhakha wedijithali. Ngokufanele ngalesi sizathu, ukuqashwa okusha okutholakalayo: omphathi wewebhusayithi ye, Umbhali we-Seo, Uchwepheshe we-Seo, umklami Web, Umphathi wezeMphakathi, nochwepheshe beUmphathi Wezindawo ukuhlanganisa kangcono wonke amakhono ochwepheshe futhi ubenze basebenze ngempumelelo ephezulu. Kusukela namhlanje, bese kuba nguMqondisi weSolezwe UCaterina Doddis Kuzojoyinwa uStefano Picci, Valeria Manganaro, Marialuisa Calatozzo, Stefania Calì, Laura Coniglio, Ilenia Minissale, Giuseppe Tortorella, Julia Merenda, Liliana Argurio, Noemi Vadalà, Claudia Nichi noDario Costa.
Tags: izinkampani ibhizinisi ukumaketha ibhizinisi Izindaba ukuqala okuhle